Mayelana NATHI - Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd.
IZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. yasungulwa ngo 2002 (inkampani Its yokuthengisa kuyinto IZouping Mingyuan Imp & ExpTrade Co., Ltd.). Kungumkhiqizi ochwepheshe bezindlela zokwelapha nezibulala-zinambuzane, izithasiselo zokudla, ama-retardant alangabi e-elekthronikhi nezinto ezibonakalayo ezingamakhemikhali. Ngokukhula okuqhubekayo nokuthuthuka kwenkampani, ukuze kwandiswe ibhizinisi lokuthekelisa phesheya kwezilwandle, iZouping Mingyuan Imp & ExpTrade Co, Ltd. (inkampani yokuthengisa ukuthekelisa) yasungulwa ngonyaka we-2008. Ukuze ibe yinkampani enkulu yokuthekelisa ehlanganisa imboni kanye nezohwebo. Ukuthembela eqenjini eliqinile le-R & D, isipiliyoni sokukhiqiza esinothile, kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi olusungulwe nxazonke ze- "ISO9001-2000", sisungule ubudlelwano obuhle bokusebenzisana namakhasimende amaningi emazweni nasezifundeni ezingama-48, njenge-United States, Japan, South Korea, India, Europe, futhi yathuthukisa amakhulu emikhiqizo. Iningi lale mikhiqizo lithunyelwa e-United States, Germany, New Zealand, India, South Korea, Japan, Belgium, Taiwan, Southeast Asia nakwamanye amazwe nezifunda. Inkampani idlulise isitifiketi se-ISO9001: 2000 ngo-2002, isitifiketi sebhizinisi eliphakeme ngo-2003 kanye no-OHSM18000 isitifiketi sokuphepha emsebenzini kanye nesitifiketi sokuphathwa kwezempilo ngo-2004.
Inkampani inamathela ebaluleke kakhulu ekwakhiweni kwethalente ithimba kanye nokutshalwa kwezimali ocwaningweni lwesayensi, futhi ikhuthaza ukuthuthukiswa okusheshayo kwebhizinisi ngemisha yesayensi nezobuchwepheshe. Ithole ngokulandelana amalungelo obunikazi angaphezu kwayi-30 okusetshenziswayo nemodeli yokusetshenziswa, futhi inamalungelo empahla yengqondo ezimele "yokulungiselela ubuchwepheshe be-cationic polymer encibilika emanzini ngobuhlalu". Impumelelo yayo kwezesayensi nakwezobuchwepheshe ilinganiselwe ngokuthi "yizinga eliphakeme lamazwe omhlaba" nguMnyango wezimboni nobuchwepheshe bolwazi. Leli bhizinisi lilinganiswe nangokuthi "iSifundazwe saseShandong esikhethekile futhi esikhethekile amabhizinisi amasha amancane naphakathi", "ibhizinisi elilodwa ucwaningo lobuchwepheshe kanye nentuthuko isikhungo" kanye "nesayensi nobuchwepheshe-based amabhizinisi amancane naphakathi". Ihambisana nomqondo "wokuvikelwa kwemvelo kwesikhathi eside kanye nokuthuthukiswa okusimeme kwezindawo zokushisa imfucuza enobungozi", inkampani iphinde yathuthukisa amandla ayo entuthuko wesikhathi eside.
Le nkampani ihlala inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yamakhasimende, egxile kusevisi, eyokuqala, yokusekelwa kwezobuchwepheshe", igcina umoya webhizinisi we "cocreation, share and win-win", ithuthukisa ngokuphelele ukuncintisana kwayo, futhi idale imininingwane yezimboni enenkonzo yokuqala, ubuchwepheshe besigaba sokuqala kanye nemikhiqizo esezingeni lokuqala ngokusebenzisa ukwenziwa kwezinto ezintsha, ukuphathwa kokusebenza okuhle nokwakhiwa kwethalente le- "The Swiss Army Knife", ngomqondo oqotho, ifaka izimpiko ezikhulayo zomsebenzisi .
Ngibheke phambili esikhathini esizayo, inkampani ithatha "ukuqinisa iMingxing, ukuchuma okuvamile, nokuzuzisa umphakathi" njengenhloso yayo yomlando; uthatha "ubumbano nokulwela ukwenza okuhle" njengomoya wobumbano; uphishekela ubuchwepheshe obuhola umhlaba wonke futhi ugcina umkhiqizo omuhle womkhiqizo njengenhloso yawo; ithobela umqondo wokumaketha we- "based-based, quality first, first-class service, ne win win win ngokubambisana" ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo emisha enelisekile isikhathi eside isicelo esisha, sihlala sisheshisa ijubane lentuthuko yebhizinisi, futhi silwele ukufeza umbono webhizinisi "wokuba ngumholi wemboni nokwakha iZouping ikhulu leminyaka"!